तथ्य जाँच पूर्व मन्त्री बास्कोटाको दाबी गलत
साझा सरोकार काेरोना भाइरस खोपसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ?
साझा सरोकार कोभिड-१९ खोप कसरी र कहिले आउँछ नेपाल ?
तथ्य जाँच काेभिड-१९ बारे वल्ड डक्टर्स अलाएन्सकाे भिडियाे भ्रामक
तथ्य जाँच रेड मर्करी के हो ? कसरी फैलियो यसबारे अफवाह ?
काेरोना भाइरस खोपसम्बन्धी अध्यादेशमा के छ ? कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको यतिखेर विश्वभर प्रतीक्षा छ । हाल फाइजर, मोडर्ना लगायत कम्पनीले कोभिड-१९ विरुद्धको खोपका अन्तिम चरणका परीक्षण गरिरहेका छन् । नेपालीहरु पनि यस महामारीबाट आक्रान्त भएकाले कोभ... विस्तारमा
कोभिड-१९ खोप कसरी र कहिले आउँछ नेपाल ? कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको परीक्षणबारे पछिल्ला दिन आएका सकारात्मक समाचारले खोपको व्यग्र प्रतीक्षा गरिरहेका देशमा आशाको सञ्चार गरेको छ । अमेरिकी कम्पनी फाइजर र जर्मनीको बायोएनटेकले संयुक्त रुपमा विकास... विस्तारमा